Rubber Extruder - China Rubber Extruder Mutengesi, Fekitori -Jwell
Kuti usangane nezvinodiwa mumusika, kambani yedu yakagadzira nyowani inotonhora-inosimbisa rabha extruder. Hunhu hukuru hwerudzi urwu extruder: iyo tembiricha yekudzora sisitimu uchishandisa yakaparadzanisa kudzora kudzora; iyo yerabha zvinhu inomanikidzwa kudyisa neiyo yekumanikidza roller; yakaderera-tembiricha plasticization, yakakwira kuburitsa, uye yakaderera-simba kudyiwa. Mhando dzakadaro extrusion zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumotokari, zvitima, ngarava, kuvaka, silicone, waya kana tambo uye imwe indasitiri inoshandisa zvisimbiso.